May | 2009 | Mg Ogga's Notes
ကျနော် လူမှုဝန်ထမ်းနဲ. The leprosy Mission International နဲ့ပူးပေါင်းပြီး မသန်စွမ်းသူများ အတွက် Survey ကောက်ရန် ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော် ဒီမောဆိုး မြို.များကို သွား ရောက်တော့ပါမယ်။ တစ်လ နှစ်လခန်. ကြာမှာဖြစ်လို. Blog မရေးနိုင်တော့ပါ။ တစ်လလောက်ခွင့်ပေးပါနော် ကျနော်ဘလောလေးဆီလာလည်သူများကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကယားက ပြန်လာရင် လက်ဆောင်ပိုစ်တွေ အများကြီးရေး ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အခုတင်တဲ့ ပိုစ်တွေက အကြံကုန်လို. ဆားချက်ထားတာပါ အားလုံးကိုကျေးဇူးပါနော်။ BYE BYE Advertisements
May 15, 2009 in သတင်း.
Buddhists are increasingly blunt about affirming the primacy of this present world rather than being “world denying,” to use Albert Schweitzer’s old phrase. Among Chinese Buddhists, this idea is connected most commonly to the reformer Taixu (d. 1947) who expressed it as Buddhism for human life (jensheng fojiao). More recently it is linked to the…
There are moments in my life I do not feel like doing anything, but just to be still, not even writing something like this (but it comes). You see someone and feel how wonderful that person is, going about his business. May his pains and wishes not blur out the joy that is his life,…
May 15, 2009 in အက်ဆေး စာတန်း, Uncategorized.
ကျွန်တော် သူ့ကိုချစ်မိနေလို့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်တယ်ဗျာ။ အဲဒါကို မောင်မင်းကြီးသားက “မလုပ်နဲ့ အဲဒါ ကြိုတင်ကြံစည်မှု” တဲ့၊ အဲဒါကြောင့် သူအပြင်ထွက်တဲ့အခါ စာလိုက်ပေးမယ် ပြောပြန်တော့ သကောင့်သားက “မလုပ်နဲ့ အဲဒါ ၀တ္တရားနှောက်ယှက်မှု” တဲ့ဗျာ။ “အိုကွာ ဒါဆိုရင် သူမြင်သာအောင် သူ့အိမ်ရှေ့ ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန် လုပ်မယ်ကွာ”၊ “ဟကောင်ရ အဲဒါ မသင်္ကာမှုနဲ့ ငြိမယ်ကွ မလုပ်နဲ့” တဲ့၊ “ဟာ ဒါဆိုရင်တော့ ဂစ်တာလေးတီးပြီးတော့ သူသိအောင် လုပ်ပါရစေကွာ”၊ “သြော် မင်းက ဆူပူသောင်းကျန်းမှုနဲ့ ငြိချင် နေပြီထင်တယ်” တဲ့၊ လုပ်ပြန်ပြီဗျာ၊ ကျွန်တော် ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲ။ “ကျွန်တော်ချစ်တာကို သူမသိနိုင်ရင် နေပါစေတော့၊ ချောင်ကွယ်တနေရာကနေပဲ ငေးတော့မယ်ကွာ၊ ကိုယ်ချစ်နေရရင် ပြီးတာပါပဲလေ”၊ “ဟာ…
May 15, 2009 in ဟာသသရော်စာ.
စပါးပြီးယာ၊ယာပြီးစပါး အားချိန်မဲ့၊နားချိန်မဲ့ ချို.တဲ့ဘ၀များ၊ ပြတ်သားပီပြင် မျက်ဝါးထင်ထင်၊မြင်ရ တွေဆုံ.ကြမှ၊ဲမြို.ပြယဉ်ကျေးမှု အမှောင်ထုအောက်က ပိနေကြတိုတတွေ စာနာ နားလည်နိုင်ပါစေ။ ဒီရွာကလေး မြို.နဲ.၂၀မိုင်ဝေး ပညာသင်ရာ ကျောင်းတော်သာကင်း မိုးတွင်းမှာဆို ချောင်းကိုကျော်ဖြတ် လယ်စပ်ဝေးဝေး ခရီးတာဝေး ကျောင်းတော်လေးအထိ ရေပြည့်လယ်ကွက် ဗွက်နက်နက်မှာ ကျောင်းသွားကျောင်းလာ ဒုက္ခမသေးလှဘူးဗျ။ EM ဆိုတာ၊ချိုနဲ.လားဟင် ပိုးသတ်ဆေးပုံး၊လုံးသလားပြားသလား ဘိုကာချီ ဆိုတာ ၊ချိုသလား ခါးသလား စိုက်ပျိုးပညာ ပြည်ရွာဖွံဖြိုး တိုးတက်စေဖို. ကြိုးစားဖို.လိုကြောင်း မမေ့ကောင်းဘူးဗျ။ တရွာလုံးဖွေကာကြည်. ကျောင်းနေသက်တမ်း ဦးရေစစ်တမ်းကောက်ရင် လက်၁၀ချောင်းမပြည့် ၉တန်းဟာအမြင်.ဆုံး အမှောင်ဖုံးသောပညာရေး ပေးကာပေး၏မရ သွေးကားသွေး၏ မမြ။ ပညာရေး၊စီးပွားရေး လူမှုရေး၊ကျန်းမားရေး လေးချက်ပဲတွက်တွက် ဆက်စပ်မှုရှိတာ တွေကြမှာပါဗျာ။ ရပ်ရွာလူထုစံပြုစရာ အိမ်သာတစ်လုံး တစ်ရွာလုံးတော.ရှိသင်တယ်။ ဆေးဝါးအတု၊သမားအတု Drရမ်းကုဘေး၊လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆေးပေးခန်းတော.ရှိသင့်တယ်။…
May 15, 2009 in ကဗျာ.
မြန်မာပြည်ရဲ့ လူဦးရေအနည်းဆုံးဒေသ ပုံပြင်ဒဏ္ဏာရီ များအများဆုံးပေါ်ထွက်ရာ ရာသီဥတုနှစ်မျိုးလောက်ရှိတဲ့နေရာဒေသ တစ်ခုကို အလုပ်ကိစ္စတစ်ခု နှင့် ခရီးထွက်ရပါမယ်။ ပြန်လာရင် ဒီဒေသက အကြောင်းအရာတွေ ဓာတ်ပုံတွေ အများကြီးတင်ဖြစ်ပါမယ်။ ဒီဒေသအကြောင်းရေးဖြစ်ပါမယ်။ တစ်လခွဲလောက်ကြာမယ် မသွားခင်နိုင်သလောက်တော့ရေးပါမယ်။ 😉
May 12, 2009 in သတင်း.
ကျနောကမ္ဘာကြီးစိမ်းလန်းဖို. သစ်ပင်လေးစိုက်မယ်ကြံတုန်း မေမေက သစ်တောအုပ်လေးကို လက်ဝါးထဲတည်.ထားတယ်။ ကျနော် ကိုလံဘတ်ကိုအားကျပြီး ဘ၀ကိုရွက်လွင့်မဲ့အချိန်မှာ မေမေမေတ္တာတွေ့က သမုဒ္ဒရာလေးစင်းမက။ ကျနော်လောကကြီးနဲ့ ရန်ဖြစ်နေချိန်မှာ မေမေ က အိုနာသေ စကြ၀ဠာတောကြီးကို သီလ သမာဓိ ပညာ ဓားသုံးလက်နဲ့ ခုတ်ထွင်ရှင်လင်းနေရဲ့။ p.s: မေမေ သစ္စာအလင်း အတွက်အမေနေ့မှာရေးတာပါ မအားလို. အခုမှပဲတင်ဖြစ်တယ်
May 12, 2009 in ကဗျာ.